Doubts raised over Zimbabwe poll - BBC News
Longer vote for queuing Zimbabweans Jump to media player Zimbabwean election officials allowed people to vote after the official end of polling, as a high turnout led to long queues.
Queues form as Zimbabwe polls open Jump to media player Zimbabweans have begun voting in a presidential election that has already been hit by allegations of fraud.
Zimbabwe elections - in 60 seconds Jump to media player Patience Chinwada explains, in 60 seconds, the importance of the elections in Zimbabwe taking place on 31 July.
Zimbabweans hope for 'change' Jump to media player Zimbabweans go to the polls on Wednesday to elect a president and parliament, in an election that will mark the end of the troubled coalition government between veteran President Robert Mugabe and Prime Minister Morgan Tsvangirai.
Mugabe 'would accept poll defeat' Jump to media player Zimbabwe's President Robert Mugabe has declared that he will surrender the post if he fails to win Wednesday's election, after 33 years in power.
Doubts raised over Zimbabwe poll
Votes continue to be counted in presidential and parliamentary elections in Zimbabwe but there are claims the poll was "seriously compromised."
The Zimbabwe Election Support Network, a group of citizen observers, said up to a million urban voters had been prevented from voting.
Zanu-PF and the MDC have shared an uneasy coalition government since 2009 under a deal brokered to end the deadly violence that erupted after a disputed presidential poll the previous year.
Go to next video: 'Zimbabwe is keen for change'